XOG MUHIIM AH: Itoobiya oo dhexdhexaadin ka dhex-sameynaysa Soomaaliya & Imaaraatka Carabta, FAAHFAAHIN – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
DAAWO:Masuul ka tirsan xisbiga UCID oo fashiliyey siraha Muuse Biixi & Arin aanan la filayn oo banaanka timid 36 mins ago
Home 2018 June W.Gudaha, Wararka Maanta, Warbixino XOG MUHIIM AH: Itoobiya oo dhexdhexaadin ka dhex-sameynaysa Soomaaliya & Imaaraatka Carabta, FAAHFAAHIN
XOG MUHIIM AH: Itoobiya oo dhexdhexaadin ka dhex-sameynaysa Soomaaliya & Imaaraatka Carabta, FAAHFAAHIN
June 17, 2018 |by W LAASCAANO| 0
MUQDISHO(P-TIMES)- Ra’iisulwasaaraha dalka Itoobiya Dr Abiy Ahmed Cali ayaa shalay tagey magaalada Muqdisho, isagoo halkaas kula kulmay Madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ka wada hadleen suuragalnimada in ay Addis Ababa dhexdhexaadin ka dhex-samayso Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta oo uusan wanaagsaneyn maalmihii u dambeeyey xariirka kala dhaxeeyey.
Saraakiil Diblumaasiyadeed oo ku kala sugan Nairobi, Muqdisho & Addis Ababa ayaa hoosta ka xariiqay in laga wada hadlay sidii ay dawladda Itoobiya unoqon lahayd bud-dhiga isku xira labada dal, oo hadda uusan wanaagsaneyn xariirka ka dhaxeeya.
Puntlandtimes.com waxay ogaatay in ay uu Raysalwasaaraha Itoobiya maalin ka hor safarkiisa Muqdisho ugula kulmay Addis Ababa wafdi uu hogaaminayo Dhaxalsugaha dalka Imaaratka Carabta ahna taliye kuxigeenka ciidamada Maxamed Bin Sayid, kana wada hadleen arrimahan Soomaaliya ku saleysan.
Imaaraatka Carabta ayaa horey tababaro ciidan uga fulin jirtay Muqdisho, waxayna gacanta ku heysay ciidan ka baan 2000 Askari, kuna sugnaa Muqdisho oo kaliya, laakiin wey ka baxday joojiseyna dhamaan taageeradii ay siin jirtay dawladda Faderaalka, markii uu xumaaday cilaaqaadka labada dal.
Soomaaliya ayaa soo saartay amaro is xig-xigey oo ku saleysanaa qadiyadda Imaaraatka ay la leeyihiin, waxayna dhaafiyeen heerka caadiga ah ee diblumaasiyadda caalamka, iyagoo qabtay baarisna ku sameeyey safar Diblumaasiyadeed oo u socday Safaaradda Imaaraatka Carabta ee magaalada Muqdisho.
Isku adeyga Addis Ababa ee dhexdhexaadin laga dhex-sameeyo Imaaraatka Carabta & Soomaaliya ayaa ah mid ay dhinacyada oo dhan rajo wanaagsan ka qabi karaan, maadaama Ra’iisulwasaaraha Itoobiya yahay saaxiib sumcad wanaagsan ilaa hadda ka haysta dhinacyada is haya, gaar ahaana Soomaalida & Imaaraatkaba.